के तपाईले मकैको मःम, चटपटे, खिर खानु भएको छ ? (हेर्नुहोस भिडियोमा) | Kendrabindu Nepal Online News
के तपाईले मकैको मःम, चटपटे, खिर खानु भएको छ ? (हेर्नुहोस भिडियोमा)
२० भाद्र २०७६, शुक्रबार २०:१०
काठमाडौं । मैदा र परिकार अहिले पर्याय जस्तै भईसक्यो । मैदा विनाको खाजाघर भेट्नै सकिन्न तर नयाँ बानेश्वरस्थित संगमचोकमा भने एक खाजा घरले मैदा भन्दा मकैका परिकार दिन्छ । यहा मकैबाट बनेको मःम, सलाद चटपटे खिर साँधेको मकै जस्ता परिकारहरु पाइन्छ । यो मकै घर बिलकुल फरक प्रयोग हो । जसको सञ्चालन गरेका हुन एक इन्जिनियर विपिन कँडेलले ।
झण्डै तीन महिना अगाडि चिया गफको क्रममा अगाडि मकै पोलिरहेको दृश्यले कँडेलको सोचमा परिवर्तन ल्यायो र त्यहि सोचले आज मकै घरको रुपमा विकसित भयो । त्यो मकै पोलिरहेको दृश्यले उनलाई पनि मकैको परिकार बनाउने सोच आएको थियो । त्यसपछि उनले मकै पोल्ने मेसिन खोजे तर पाउन सकेनन् । जहा इच्छा त्यहा उपाए भने झै उनले नै आफैले डिजाइन तयार गरेर मेसिन बनाए र प्रयोगमा ल्याए ।
अहिले उनको मकै घरमा मकैका नै विभिन्न परिकार पाइन्छ । ग्राहकको भीड पनि बाक्लै लाग्छ । अझ अहिले त मकैको प्रयोगलाई स्वास्थ्यसँग पनि जोड्ने गरिन्छ । विशेष गरेर मधुमेहका रोगीका लागि मकै निकै लाभदायी मानिन्छ । मकै रेसादार तथा यसमा फाइवरको मात्रा हुनाले बढी लाभदायी हुने कँडेलको भनाई छ । थप भिडियोमाः
इन्जिनियर विपिन कँडेल, खिर, चटपटे, मकै, मःम
Prevनेपाली थुक्ने, विदेशी फोहोर टिप्ने !
हेमन्त शर्मा र विष्णु माझीको बनमारा गीत बजारमा (भिडियो सहित)Next
मकैमा फौजी कीराको प्रकोप, किसान समस्यामा
मकैको सुपदेखि केकसम्म, मनग्य आम्दानी